Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay geerida Cabdiqaadir Mursal - Awdinle Online
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay geerida Cabdiqaadir Mursal
Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay geerida naxdinta leh ee ku timid Rug cadaa saxaafadeed Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ku geeriyooday dalka Mareykanka.
.Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa uga tacsiyadeeyay asxaabtii iyo ehelladii uu ka geeriooday marxuumka, isaga oo alle uga baryay in uu janadii fardowso ka waraabiyo.
“Allaha u naxariisto saxafigii weynaa marxuum Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ku geeriyooday dalka Mareykanka, waxaan uga tacsiyeynayaa qoyskiisa, bahda saxaafadda iyo Shacabka Soomaaliyeed. Marxuum Mursal waxa uu kaalin weyn ka soo qaatay horumarinta saxaafadda Soomaaliyeed ayuu yiri” RW Rooble.
Mursal ayaa bilihii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay dalkaas. Gabadhiisa ayaa sheegtay in xanuunka safmarka ah ee COVID-19 uu ku dhacay balse uu ka bogsaday, hase yeeshee uu saameyn ku reebay.
Wuxuu Mursal in muddo ah ku noolaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagoo sanadkii 2014 u wareegay dalka Mareykanka, halkaas oo uu ka aasaasay idaacadda KALY, Codka Soomaalida Mareykanka oo uu markii ugu dambeysay madax ka ahaa.
Previous articleJubbaland oo AMISOM ka dalbatay hal arrin
Next articleHeshiis laga gaaray Jadwalka doorashooyinka Baarlamaanka & Madaxweynaha